ကြက်သွန် set ကိုစိုက်ပျိုး ကြက်သွန်မျိုးစေ့ကိုမစိုက်ပျိုးမီ၎င်း၏အားသာချက်ရှိပါတယ်။ ထိုသို့သောနည်းလမ်းအပင်ပိုမိုမြန်ဆန်ကြီးထွားနှင့်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းအမြစ် system ကိုရပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအစောပိုင်းကစပါးရိတ်ရာကာလသည်ပါလိမ့်မယ်။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဥယျာဉ်မှူးများကရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုမှာ: Do လိုအပ်မစိုက်ပျိုးမီကြက်သွန်အစုံဖြတ်?
လယ်သမားများအနက်အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောအမြင်, စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုမီဖြတ်ကြက်သွန်နီကြက်သွန်နီရှိမရှိလည်းမရှိ။ သို့သော်အမြင်များ၏ရမှတ်အများစုသီးနှံနေဆဲထွက်သယ်ဆောင်ရမည်ဟုစဉ်းစားရန်နာမယူဘဲနေကြသည်။ ကြက်သွန်နီကိုအလွယ်တကူမြေဆီမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အမွေးအတောင်ပါစေနိုင်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်ဤစက်ရုံ၏တစ်ဦးထက်ပိုလျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အဖြစ်သင်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ကလောင်နဲ့အကောင်းတစ်ဦးမီးသီးရနိုင်သည်။
မစိုက်ပျိုးမီကြက်သွန်နီကြက်သွန်လှီးဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုမေးခွန်းမှတုန့်ပြန်မှာတော့ကျနော်တို့ကအောက်ပါနည်းလမ်းအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဘောပင်ပေါ်လေယာဉ်ဆင်းသက်ဘို့ပြင်ဆင်နေသည့်ကြီးမားသောမီးသီးအတွက်, သုံးပုံတစ်ပုံအဖြစ်ဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကလောင်ဆွဲထုတ်ဖို့အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်ပြီးတဲ့အခါ, Interrupt မဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျကြက်သွန်နီကြီးထွားသွားနေတယ်ဆိုရင်, ကသာအမြီး Seva ဖြတ်ဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ တချို့ကအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဥယျာဉ်မှူးပခုံးပေါ်လည်ပင်းဖြတ်ကြက်သွန် inexperience နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအထဲတွင်ပါသောပျိုးပင်ခုတ်ဖြတ်။ ဒီ၏အကျိုးဆက်အပြည့်အဝကြီးထွားမတတျနိုငျသောပထမဦးဆုံးအရွက်, ကိုပျက်စီးစေပါလိမ့်မယ်။
ကြက်သွန်နီအအေးကိုခံနိုင်ရည်အပင်မှပြောပြတယ်။ အပူချိန် C. ° 10 + ထက်ပိုမိုမြင့်မားလာသောအခါဒါကြောင့်, ဆင်းသက်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင် စည်းကမ်းကြောင့်ဧပြီလရဲ့အလယ်သို့မဟုတ်အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
စိုက်ပျိုးပစ္စည်းကြက်သွန်ပြင်ဆင်နေသည့်အခါအစုံကျိန်းသေ sort နှင့်ပျက်စီး select လုပ်ပါ, ပုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်မီးသီးအညှောက်ပေါက်။ ထိုအခါက 8 နာရီများအတွက်အပူချိန် + 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအပူရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမည်ရတစ်ဦးကြက်သွန် set ကိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်:
ဒါဟာ downy အနာကဲ့သို့သောရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
ထိုခဏခြင်းတွင်မစိုက်ပျိုးမီ sevok 15-20 မိနစ်ကြေးနီ sulfate တစ်ဦးတစ်ရာခိုင်နှုန်းဖြေရှင်းချက်ထဲမှာစိမ်အကြံပြုခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်အရေဖျားလှီးကြက်သွန် set ကိုသင်တစ်ဦးပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးပေါများစပါးရိတ်ရာကာလရရှိရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့, ရိုးရှင်းသောအကြံပေးချက်များ - ပျိုးပင်ဆေးပြားများအတွက်
Celosia - အမျိုးအနွယ်ကိုအနေဖြင့်ကြီးထွားလာ
ဘယ်လို Currant ကျဆုံးခြင်းအတွက်အသစ်တခုတည်နေရာအစားထိုး?
ခရမ်းချဉ်သီး - စိုက်ပျိုးပျိုးပင်များ
Nike ကဖိနပ်ပြင်ဆင်ပြီးသုံး running
အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အီတလီစတိုင် - ဒီဇိုင်းကိုအဆင်ပြေအိုးအိမ် features
Shopska သုပ်: စာရွက်
အိန္ဒိယဆန်မှို - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
Kristen Stewart ကအားလုံး ultra-ဆံပင်များကအံ့အားသင့်ခဲ့သည်!
Amur ဖော့ဆို့ - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
Pleurisy - လက္ခဏာများ